Noocyada geedaha magaalooyinka iyo awoodda ay u leeyihiin inay soo nuugaan CO2 | Cusbooneysiinta Cagaaran
Adrian | | Qabso co2, Deegaanka
ka Qiiqa kaarboon dioxide Waxay walaac ka qabaan magaalooyinka, sidaa darteed waxay raadinayaan siyaabo lagu yareeyo ama lagu nuugo wasakhdaas.
La Junta de Andalucía iyo Jaamacadda Seville ayaa ka shaqeynaya mashruuca loogu yeeray "Kaymaha magaalooyinka". Kaas oo ka kooban qaadashada aag dadweynaha ka mid ah oo la beero tiro aad u tiro badan oo geedo ah iyo dhir si loo sameeyo tiro kaymo magaalo leh Noocyada asalka ah oo nuugaya kaarboon laba ogsaydh.
Waxaa la baaray kuwaas oo ah noocyada lahaa awooda ugu weyn nuugo CO2 waxaana lagu soo gabagabeeyey in geedaha sida liin dhanaanta, liinta qadhaadh, xammeeti iyo laurel ay yihiin kuwa leh kala-saarista ugu sareysa CO2. Dhanka dhirta, kuwa ugu waxtarka badan waa oleander, ligustrina, lavender, iyo timir.
Adeegsiga noocyadan magaalooyinka dhexdeeda ma hagaajin doono oo keliya tayada hawada maadaama ay kala sifeyneyso walxaha iyo wasakhda, laakiin sidoo kale waxay ku guuleysan doonaan bilicsanaanta iyo hagaajinta muuqaalka magaalooyinka, waxay awoodi doonaan inay soo nuugaan biyo badan sidaa darteed waxay ka caawineysaa ka hortagga daadadka, nidaaminta heerkulka deegaanka, yareynta buuqa, iyo faa'iidooyinka kale.
Waxaa lagu qiyaasaa in 2000 geed oo leh awood sare si ay u soosaaraan CO2 ay jabin karaan 160 tan oo ah kaarboon laba ogsaydhka sanadkiiba, taas oo wax badan u leh magaalo. Haddii tan lagu daro dhimista wasakheynta gawaarida iyo warshadaha, horumar weyn ayaa ku yimid deegaanka.
ka dabiiciga ah CO2 saxanka Aad ayey lagama maarmaan u yihiin laakiin kuma filna haddii qiiqa qiiqa laga sii daayo oo ficilo kale iyana la fuliyo.
Dhowr degmo oo ku yaal Andalusia ayaa fulinaya kaymaha magaalooyin mashruuc loogu talagalay in lagu hagaajiyo tayada nolosha dadka deggan isla markaana la iska kaashado la dagaallanka isbedelka cimilada.
Ficilada noocan ahi waa kuwo waxtar leh oo guud ahaanba u oggolaanaya in lagu soo koobo kuwa kale, waana sababta ay u tahay hab lagu dhiirrigelinayo ficillada la taaban karo si loo yareeyo qiiqa CO2 ee gudaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Qabso co2 » Noocyada geedaha magaalooyinka iyo awoodda ay u leeyihiin inay soo nuugaan CO2
padiciya pataricia dijo
wax kasta oo deegaanka ah, dabeecadda ah, ka hortagga musiibada, agriltura aniga ahaan waa wax xiiso leh, bani'aadamku weligiis kama dhammaystiro barashada. Qoraalka wanaagsan.
Ku jawaab padicia pataricia
Nalalka taraafikada ee deegaanka